RAW vinteji - oche ndị mara mma - (6 nọ na ngwaahịa) - Ezi ụlọ nchekwa Stuff
Tebụl / oche
Ọdịdị nke ọgbọ mmiri
Ajụjụ / Ihe
Họrọ otu ibe
Home / Oche / RAW nkpuru osisi - oche ndị mara mma - (6 nọ na ngwaahịa)
RAW vinteji - oche ndị patinated mara mma - (6 nọ na ngwaahịa)
A oche exude nostalgia. Ha nwere ya 50 afọ ole na ole ma nwekwa ike nke nta nke nta na ezumike nká.
Ị ghaghị ịdaba maka oche ndị a. Omume dị ndụ n'emebighị nkasi obi ebe obibi.
Anyị enyochala oche wee jiri osisi mịnye ha (ọ bụghị maka ihe ndị a na-etinye na ya). Anyị nwere okpuru maka ụkwụ na ngwaahịa ma anyị nwere obi ụtọ inye ha ya.
€ 22,5 kwa oche
Anyị na-ererịrị ọtụtụ n'ime ha ma ha na-eji ya na Liège ugbu a Le Barbecue de Jacky
Enwere ike iji ngwa njem anyị gaa na € 1Km site na PC 2520 (Emblem). Tụkwasị na nke ahụ, ọ dịkwa ike na ọrụ pallet, mgbe ahụ, anyị na-atụkọta ha na pallet. Na-eziga pallet na Belgium na-abịa na 75, ndị fọdụrụ na Europe na-abịa gburugburu € 125 kwa pallet. Na ọrụ pallet anyị enweghị ike ịma ụbọchị na oge nke nnyefe ... naanị izu a ga-enyefe ya. Na igbe nke DPD (rue 3 oche) nwere ike ịbụ € 15 kwa ngwugwu n'etiti Belgium na n'etiti € 15 - € 20 maka Europe.
Anyị na-anakwere ECO-CHECKS (akwụkwọ na dijitalụ)!
Categorieën: Na nhọrọ, Oche
Pagholz / Thur-op-Seat / Flöttoto (200 na ngwaahịa)
1.7k -eso ụzọ
1.1k -eso ụzọ
Chọọ site na agwa
mmanya barista bistro brocante ụlọ ọrụ Cafestoelen kọfị design eromes Factory formica Galvanitas akwa aka ọbịa ulo oru Egwuregwu Mmepụta Ihe ulo oru ulo oru akwụkwọ nri oche oche oche ndị na-ekpo ákwà stool ihe mkpofu Ime ulo Marko osisi siri ike Pagholz Pagwood gbapụta mmanya nkwụsị restaurant ochie oche ụlọ akwụkwọ oche ụlọ Oche taabụ okpokoro tebụl Terrace Ogwurugwu ala Tubax oche oche Devid agụghị ndị gbara emepụta ihe ebe ọrụ nwa etiti
Nnukwu oche oche oche Norwegian (10 na ngwaahịa) € 30,00
Galvanitas S16 retro toppers! 5 dị na ngwaahịa € 121,00
ụlọ akụ si ụlọ akwụkwọ refectory
Tebụl dị n'akụkụ / nri dị na okpokoro abụọ (2 na ngwaahịa - dispo) € 40,00
Kho Liang Le - Nhazi Dutch - onye isi ala (10 nọ na ngwaahịa) € 50,00
Vintage topper! Galvanitas S22 - 30 nọ na ngwaahịa € 121,00
Nice retro ezumike oche - gispen ịke (2 nọ na ngwaahịa) € 60,00
Kho Liang Le - ihe osise Dutch - ndị na - arụ ọrụ mmepụta ihe (30 nọ na ngwaahịa) € 65,00
Oche canteen Industrial - HORECA topper - stackable (80 dị) € 35,00
setịja oche abụọ na-acha anụnụ anụnụ na ọcha (setịpụrụ ọnụ ahịa) € 60,00
Ebube Ezigbo Ihe - Yuri Hullak
Adreesị na oge
Ụlọ Ọrụ Na-arụpụta Ezigbo Ihe
Na The Good Stuff Factory ị zụrụ Devid agụghị ndị gbara na ulo oru oche si sixties 50, '60,' 70 na '80. Anyị na-enye 'Opporfurnities' ma ọ bụ n'èzí Ohere maka ochie ndozi nke gị HORECA azụmahịa, ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ.
Hụ ihe anyị rereworị:
Nri na ulo oru
Maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị na-eri nri anyị nwere nnukwu batches nke oche ndị dị na vintage na ngwaahịa. Anyị na ngwaahịa na emi odude ke Province of Antwerp nso exits E313, E19 na E34.
Ntụgharị / nsụgharị / Translation
© Ezi ufflọ ọrụ ezigbo Stuff | Usoro na ọnọdụ | Onye kere ya Ọhụụ